Pureen Kids Yogurt Head To Toe - Apple 150 ml
By Namu Life Snailwhite
1 ဒိန်ချဉ်ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေနှင့် ဆံသားကို ပျော့ပျောင်းနူးညံံ့စေပါသည်။
2	သားသားမီးမီးများတင်မက လူကြီးများပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3	သားသားမီးမီးတို့အကြိုက် မွှေးရနံ့များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Paraben , MIT နှင့် SLS တို့လုံးဝ မပါဝင်ပါ။
4 ရေချိုးပြီးသည့်တိုင် မွှေးရနံ့စွဲကျန်နေစေသည့် ခေါင်းလျှော်ရည်+ ရေချိုး ဆပ်ပြာရည်ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။
5	အသက် ၁နှစ်မှစ၍ လူကြီးများအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Pureen Kids Yogurt Head To Toe - 150 ml
1	ဒိန်ချဉ်ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေနှင့် ဆံသားကို ပျော့ပျောင်းနူးညံံ့စေပါသည်။
4	ရေချိုးပြီးသည့်တိုင် မွှေးရနံ့စွဲကျန်နေစေသည့် ခေါင်းလျှော်ရည်+ ရေချိုး ဆပ်ပြာရည်ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။
Pureen Natural Plus - Feeding Bottle 8.0Z
1.	PP plastic ဖြင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော နို့ဘူးသည် အပူချိန် ၁၀၀°C အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
2.	အကြမ်းခံပြီး အပူနှင့်ထိတွေ့သော်လည်း BPA ဓာတုပစ္စည်း အန္တရာယ်မရှိပါ။
3.	Food grade စီလီကွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပျော့ပျောင်းသည့် နို့သီးခေါင်းသည် သဘာဝမိခင်နို့စို့နေရသလို အသွင်တူစေပါသည်။ ကလေးငယ်၏ သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူမှုပုံစံကို အားပေးသည်။
4.	ထို့ကြောင့် နို့ဘူးတိုက်နေသော်လည်း မိခင်နို့ပြန်တိုက်ရန် မခက်ခဲစေပါ။
5.	ကလေးငယ်စုပ်ယူလိုက်သော်လည်း နို့သီးခေါင်းပြားကပ်သွားခြင်း မရှိပါ။
Pureen Natural Plus - Feeding Bottle 4.0Z
Pureen BPA-Free Bottle 8 OZ. With Natural Plus Nipple
Pureen BPA-Free Bottle4OZ. With Natural Plus Nipple
1.	Tritan plastic ဖြင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော နို့ဘူးသည် အပူချိန် ၁၀၉°C အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။